कानुन पोष्ट संवाददाता Tuesday, November 5, 2019
बिबिसी – बाङ्ग्लादेशको एक अदालतले एक छात्रालाई जी वितै ज लाएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै १६ जनालाई मृ त्युद ण्डको सजाय सुनाएको छ। शिक्षकले आफूलाई करणी गरेको आरोप लगाएकी १९ वर्षीया नुसरत जहाँ रफीको गत एप्रिल महिनामा फेनी नगरमा ह त्या भएको थियो। उक्त नगर राजधानी ढाकादेखि १६० किलोमिटर पर रहेको छ।
नुसरतले करणी गरेको आरोप लगाएका प्रधानाध्यापकबाहेक उनका दुई सहपाठी छात्रा पनि ह त्यामा संलग्न भएको अदालतले ठहर गरेको छ। नुसरतको मृ त्युको घटनाले बाङ्ग्लादेशलाई स्तब्ध बनाएको थियो। त्यसपछि उनलाई न्यायको माग शृङ्खलाबद्ध प्रदर्शनहरू भएका थिए। यस्ता खालका मुद्दाको किनारा लाग्न वर्षौँ लाग्ने गरेको बाङ्ग्लादेशमा नुसरतको मुद्दा अदालतले निकै छोटो समय भित्रै छिनिदिएको छ। अभियोजनकर्ता हाफेज अहमदले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै यो प्रकरणले “ह त्या गर्ने कोही पनि बाङ्ग्लादेशमा सहजै उम्किन नसक्ने” तथ्यलाई प्रमाणित गरिदिएको बताए।
नुसरतले आफ्ना प्रधानाध्यापक सिरज उद दउलाले आफूलाई बारम्बार अनुचित तरिकाले छोएको भन्दै प्रहरीलाई उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसको ११ दिनपछि गत एप्रिल ६ मा उनलाई विद्यालयको छानामा बोलाइएको थियो। त्यहाँ उनलाई बुर्का लगाएका चार-पाँच जनाले घेरेर उजुरी फिर्ता लिन दबाव दिएका थिए।
त्यसो गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई जी वितै आ गो लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनले देहत्याग गरेको जस्तो देखाउने प्रयास गरिए पनि उनको उद्धार गरियो। उनले घटनाबारे दिएको जानकारीको भिडिओ उनका भाइले मोबाइल फोनमा रेकर्ड गरेका थिए।
केही आ क्रमणकारीको नाम लिँदै उनले भनेकी थिइन्, “शिक्षकले मलाई छोएका थिए। म त्यो अप राधवि रुद्ध सास रहुन्जेलसम्म लडिरहन्छु।” नुसरतको शरीरको ८० प्रतिशत भाग ज लेको थियो। उनको चार दिनपछि निधन भयो।
बाङ्ग्लादेशमा यौ न अ पराधको अवस्था कस्तो छ?
यौन दुर्व्यवहार र यौ’नजन्य अ’पराध बाङ्ग्लादेशमा सामान्य रहेको छ। एक्शन एडले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार तयारी कपडा उद्योगमा काम गर्ने ८० प्रतिशत महिलाले यौ’न हिं’सा देखेका वा भोगेका छन्। तर नुसरतले जसरी प्रतिकार गर्नु सामान्य होइन। किनभने त्यसो गरेमा उनीहरूसँग नराम्रो व्यवहार गरिन्छ। नुसरत प्रहरीकहाँ समेत गइन्। उनको बयानलाई भिडिओमा समेत रेकर्ड गरियो जुन पछि सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती हुन पुग्यो।
त्यसपछि प्रधानाध्यापकको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शनहरू भए। त्यो बेला नुसरतको परिवारमाथि आ’क्रमण हुन सक्ने चिन्ता बढेको थियो।
नुसरतको ह’त्यापछि कस्तो प्रतिक्रिया आयो?
नुसरतको ह त्याको घटना सार्वजनिक भएपछि बाङ्ग्लादेशमा ठूला प्रदर्शनहरू भए। तिनले देशमा यौ’न हिंसा भोग्ने पीडितले भोग्ने जोखिमको अवस्था प्रष्ट पारिदियो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सार्वजनिक रूपमा “कुनै पनि पीडक कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नसक्ने” प्रतिबद्धता जनाइन्।
सुरुमा यौ न दु र्व्यव हार भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरिरहेको प्रहरीले मे महिनामा १६ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरायो। अभियोजनकर्ताहरूले मृ त्युद ण्डको सजायको माग गरे।
PREVIOUS POST Previous post: अस्ट्रेलियामा मासु ल्याउँदा भिसा रद्द!
NEXT POST Next post: घर लुटेपछि चोरले लिपिस्टिकले लेखे, ‘भाउजु निकै राम्री हुनुहुन्छ’